Ifulethi lasebhishi, umugqa wolwandle - Apartamento Quesada - I-Airbnb
Ifulethi lasebhishi, umugqa wolwandle - Apartamento Quesada
Pilar de la Horadada, Comunidad Valenciana, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Atalaya De Marabú
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Atalaya De Marabú izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Leli fulethi elimangalisayo liseningizimu yesifundazwe sase-Alicante 's futhi linamakamelo okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-2. Liye lalungiswa kabusha enyangeni eyodwa edlule,ngakho likulungele ukwamukela abantu kungakhathaliseki ukuthi iyiphi inkathi yonyaka, ngoba lihlelwe ngokuphelele. Linendawo enhle kakhulu yokubuka ulwandle futhi awudingi imoto yokuya ebhishi noma ezitolo. Inazo zonke izinto ezidingekayo ukuze uchithe iholide, kuqala nge-Wi-Fi, zonke izinto zikagesi ezidingekayo ukuze upheke, ukuwasha, isethi yoku-ayina, i-TV, amalineni, amathawula, i-air conditioning
Indlu isendaweni yase-Mil Palmeras; ibiyindlu yethu kusukela ngomhla ka-, iye yalungiswa muva nje futhi isethelwe ukuthola isivakashi unyaka wonke; Inendawo enhle yokubuka ulwandle, futhi ulwandle lungamagceke angu-100 ukusuka efulethini, inegaraji elizimele futhi. Iyindawo ekahle yokuzivocavoca igalofu, ngoba sizungezwe izidlo zegalofu ezingaphansi kwamakhilomitha angu-40, inezindawo ezimbili zokupaka, zombili zangasese nangaphakathi kwendawo yesakhiwo, enye yazo imbozwe ngokuphelele.
I-TV engu- 52" ene-I-Netflix, ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
I-Mil Palmeras, ibalwa ngawo wonke amasevisi adingekayo ukuze uchithe iholide, ngokukhethekile ehlobo, ngenxa yokuthi i-apartment isondelene kangakanani nolwandle. Izingubo zizungezwe yizindawo eziningi zokudlela, ama-bar, amakhemisi, udokotela, ama-hairdresser, Isikhungo Sobuhle, izitolo, ukuhweba kwendawo... ngaphandle kwesidingo sokuthatha imoto, ngoba indawo yethu ingamagceke angu-100 ukusuka emgwaqeni oyinhloko.
Ibungazwe ngu-Atalaya De Marabú
Sizohlinzeka isivakashi sethu ngenombolo yethu yocingo kanye ne-imeyili uma kwenzeka sidinga usizo lwethu; sihlala eduze nendawo, yonke into engenzeka izolungiswa ngokushesha.
Inombolo yepholisi: VT-446581-A
Hlola ezinye izinketho ezise- Pilar de la Horadada namaphethelo